Primula vulgaris nezinhlobonhlobo yayo
Primula isitshalo esincane nge amahle izimbali aluhlaza eziningi florets ezincane. Khulisa lona ekhaya, futhi emapaki.
Lokhu primrose zidinga izimo ezikhethekile yeziboshwa nokulondoloza isimo sezulu oyifunayo. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi lesi sitshalo kungokwalabo uhlobo linesizotha, ukuthi ungenziwa kuphela umhlaba Peat kanye ebusweni ezimanzi. Lo mbono kuyiphutha elikhulu. primrose zisetshenziswa ukubekezelela kahle ebusika obubandayo Nokho, ngokushesha baqalaza basengozini kakhulu okusezingeni eliphezulu lokushisa ukweqisa. Ikakhulukazi ngenxa lesi sitshalo iyeke eziqhakaza futhi bafe futhi ngonyaka owalandela. Ngokwesibonelo, Primula vulgaris ukungathandwa degrees lokushisa phezu 20 Celsius emoyeni, futhi kuyinto evumayo kakhulu isikhathi zezimbali --10 degrees. Kuyaphawuleka ukuthi primrose, izinhlobonhlobo ezithinta inani elikhulu nzalo, namanje engathathi impande nangaphansi kwezimo ezingezinhle.
Lezi zilwane ezidumile kakhulu futhi kusakazeke kangakanani le Primula vulgaris (ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi acaulescent). Lokhu sitshalo kahle bazivumelanisa abandayo futhi akathandi ukuze kukhushulwe izinga lokushisa. Simila kokubili endlini futhi bengaphandle. Ukungathandwa futhi ukuthambisa obuningi, ukuze elangeni futhi okweqile. Iphila egumbini okwanele. Nakuba nokugcina izinga lokushisa elingaba ngu-10 - 12 degrees kungenziwa kwamandla ukunweba isikhathi sakho zezimbali. Primula vulgaris inamakhasi ezincane, kanye izimbali ngazinye Usayizi medium (ezine amasentimitha, kodwa ngezinye izikhathi ezingaphezu). Izimbali ngokuvamile avele zonyaka ezipholile.
Umhlabatsi Primrose, nokuhlwanyela nokunisela banendima ebaluleke kakhulu ukutshala: ngesisekelo inhlabathi kuhlanganisa nenye oluqinile futhi omnyama emhlabeni lezisekelo, kanye okwesihlanu esihlabathini. Ukunisela Kwenziwa njalo, futhi esikhathini ebusika kuyehla 1.5 - 2 izikhathi. Kufanele kukhunjulwe ukuthi primrose ezivamile ungathandi sishaye amaqabunga iningi izinambuzane.
Ukuze uhlobo bungavami kuhlanganisa primrose pink, ngokuvamile ezikhulayo ubunjalo at emaphethelweni zaseHimalaya izinguzunga zeqhwa. Umoya abandayo kanye mhlabathi omanzi kukhona inzuzo yakhe kuphela. Uma unquma ikhule emagcekeni abo, kubalulekile ukuba banakekele indawo indawo yayo. Ukuze wenze lokhu, kungcono ukuba ukhethe ehlukile endaweni ukubopha nge umswakama high.
Kukhona futhi uhlobo Ushkova primrose, kuvamile Ezimfundeni eziphakeme, lapho uhlobo eyinhloko inhlabathi eyomile, futhi inhlabathi-non-esidi, futhi kwezinye izimo ngisho uvundile impela. Lokhu Primula kuyinto amaqabunga ngempela obukhulu esinamanzi, okuyinto ebusweni alikho isidingo umswakama. indawo yayo enhle, ngokuvamile ezingxenyeni akhanywa futhi calcareous zensimu.
Primula denticulate isitshalo sasivumela undemanding, kodwa kwangathi sifudumele ngemva nehlobo vyprevayut kancane. Ukuze igweme ezinjalo imicimbi ngalesi isisekelo sayo eduze uthele inani elincane umlotha futhi umquba. Ihluke kakhulu ezinye izinhlobo zamakhiwane primrose - Florinda futhi sikimskaya. Umehluko omkhulu e izidingo semali amanzi, ngakho zikhula amachibi ikakhulukazi eduze Florinda jikelele ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi ixhaphozi ngenxa ukulutheka kwabo ukuze marshland. Ngakho-ke, uma une icebo ingadi nge echibini - lapho ungakwazi bachithe ngokuphepha lezi izinhlobo primrose. Bathanda singagxila ke. Kukhona primrose kakhudlwana futhi-East Asian ngokuthi "Japanese" ngenombolo enkulu nzalo. zinhlobo okunjalo awukwazi ukubekezelela ubusika nokuntula iqhwa, ngakho ukuze ugweme umnkantsha nabo ekwindla ikhava ungqimba ezomile eshiya-15 amasentimitha.
Uxosha eseshumi: isikhathi sokutshala
Cherry Valery Chkalov: incazelo izinhlobo, amathiphu abakhathalelayo
Kungani eziqhakaza Amaryllis endlini?
Astra Alpine, ohlanzekile ukhohlwe Ukungilandela - umhlobiso ingadi yakho
Indlela ukutshala isihlahla sama-apula
Indlela yokutshala Cyclamen kusuka imbewu: yezimfihlo zokuphumelela
1997 - unyaka kwesilwane? Horoscope, izici futhi ukuhambisana
Isimungumungwane singadala ukuthi ingane: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Isimemezelo kugwenywe inkontileka yokuthengisa
Umnyango for namakati - uthenge noma uzenze?
Atomic 420 mm nosimende 2B1 "Oka": Ukucaciswa
Indlela yokugwema elula izimpawu ngesikhathi sokukhulelwa: amathiphu
Indlela ukulungiselela kuKhesari isaladi ekhaya: iresiphi ezimbili ezilula
Amathiphu ambalwa sendlela kabusha igobolondo
Arthur Pendragon - High uyinkosi AbaseBrithani. Umlando of Great Britain
Sandwich ipayipi ukuze ngefasitele: izici ukufakwa
Ethula ukuhlaziya amagama